Wallabag: Fampiharana fampiantranoana loharano misokatra hamonjy tranokala | Avy amin'ny Linux
Wallabag: Fampiharana fampiantranoana loharano misokatra hamonjy tranokala
Androany, hiresaka momba ny a fampiharana loharano misokatra izay manakana antsika tsy hampiasa mamaky fampiharana fananana, mihidy ary mivarotra, na maimaim-poana sy freemium, toy ny Instapaper, Pocket, Memex ary Polar. Ary izao no Wallabag, iray Fampiharana PHP mampiantrano tena.
Araka izany, Wallabag dia rindranasa azontsika apetraka amin'ny seriveranay irery na olon-kafa, ary manolotra serivisy mitovy amin'ireo fampiharana voalaza etsy ambony izahay, amin'ny fomba ahafahan'ny mpitantana azy mitantana ny fisamborana ireo lahatsoratra amin'ireo pejin-tranonkala tadiavina, ho an'ny famakiana manaraka, amin'ny fomba manokana sy voadio.
Tsy vao sambany isika miresaka Wallabag ao amin'ny Blog. Ny voalohany dia 4 taona mahery lasa izay, tao amin'ny lahatsoratray teo aloha izay nantsoina "Fametrahana Wallabag amin'ny VPS", izay manasa anao hamerina hijery rehefa nahavita an'io.
1 Wallabag: fampiharana PHP mampiantrano tena
1.1 Endri-javatra ankehitriny
Wallabag: fampiharana PHP mampiantrano tena
Araka ny anao tranokala ofisialy ao amin'ny GitHub , voafaritra toy ny:
"Fampiharana fampiantranoan-tena hitahiry pejy web: Mitahiry sy manasokajy lahatsoratra. Vakio izy ireo avy eo. Amin'ny fahalalahana rehetra".
Mandritra, ao amin'ny tranonkala ofisialy Voalaza toy izao:
"Fampiharana iray azonao ampiasaina amin'ny solosainao, noho ny interface web-ny. Saingy azonao atao koa ny mitondra sy mampiasa Wallabag na aiza na aiza. Ohatra, afaka mitahiry lahatsoratra amin'ny solosainao findainy any am-piasana ianao, manomboka mamaky izany amin'ny finday finday ao anaty metro, ary mamita ny famakiana azy amin'ny solosainanao eo am-pandriana.".
Ary ao amin'ny azy tranokala amin'ny Android Voalaza toy izao:
"Rindrambaiko aorian'ny famakiana. Tsy toy ny serivisy hafa io fa loharano malalaka sy malalaka. Namboarina izy io mba hahafahanao mamaky sy mitahiry ny lahatsoratrao amin'ny fomba milamina. Azonao atao ny misintona ao amin'ny wallabag.org ary manaraka ny torolalana hametrahana azy amin'ny mpizara anao manokana, na afaka misoratra anarana mivantana ao amin'ny wallabag.it. Ity fampiharana android ity dia ahafahanao mamaky sy mitantana ny lahatsoratrao ary mampifanaraka azy ireo azy miaraka amin'ny mpizara wallabag".
Wallabag Nohavaozina matetika hatramin'ny namoronana azy io, ka ny mampiavaka azy indrindra dia ny:
Manolotra famakiana mahafinaritra: Satria mamoaka ny atin'ny lahatsoratra, ny atiny ihany, ary mampiseho azy amin'ny endrika azo zahana.
Ahafahanao mifindra votoaty atolotra amin'ny serivisy hafa: Toy ny Pocket, Readability, Instapaper, na Pinboard.
Manolotra API azo ampiharina sy tsotra: Mba hahafahan'ny mpandrindra mampifandray ny fampiharana azy ireo amin'ny Wallabag napetraka.
Manohana mpamaky RSS / mpamory feed maro: Anisan'izany azontsika lazaina: Miniflux, Vienna RSS, FreshRSS, RSS Tiny Tiny Tiny, Leed, mpamaky sakafo ary famahanana mirehitra.
Ary tsara ny manamarika izany Wallabag, izy io koa dia rindrambaiko tohanan'ny Yunohost, izay azo hamarinina amin'ireto manaraka ireto rohy. Raha tsy fantatrao Yunohost, manasa anao izahay amin'ny faran'ity famoahana ity hamaky ny famoahana mifandraika amin'izany. Farany, ao amin'ny wallabag.it manolotra mivantana ny fampiasana azy ireo, izay mety ho fitsarana maimaim-poana mandritra ny 14 andro tsy misy fetra.
FreedomBox, YunoHost, ary Plex: Sehatra 3 tsara hijerena
Ny fametrahana azy dia tena tsotra, ary ny tahirin-kevitra Tsara sy mora azo izy io, na dia tsy voadika amin'ny teny Espaniôla fotsiny izy izao Anglisy, frantsay, alemanina ary italiana. Mba hanatanterahana ny fametrahana dia araho ny dingana tsotra voalaza eto ambany rohy.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" momba ny fampiharana PHP fampiantranoana tena antsoina «Wallabag», izay heverin'ny maro ho iray amin'ireo safidy loharano misokatra tsara indrindra Pocket, satria mamela antsika hitahiry izay vakiteny na lahatsoratra ato amin'ny mpizara anay manokana, manome fahefana anay mihoatra ny atiny; dia liana sy ilaina lehibe, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Wallabag: Fampiharana fampiantranoana loharano misokatra hamonjy tranokala
Calla, rafitra videoconferencing izay miasa ao amin'ny Jitsi nefa misy fifandraisana manokana
Google dia efa nanomboka tamin'ny fampandehanana ny IETF QUIC sy HTTP / 3 ao amin'ny Chrome